Categories Nkume linux Tags Gburugburu Desktọpụ Plasma KDE, Nkume Linux 8 Mail igodo
Satọde, Disemba 4, 2021 5:14 nke ụtụtụ
Ọ bụ naanị ụzọ ị ga-esi nweta KDE site na ịhọrọ ya na cog? Ọ nwere ụzọ ọ bụla iji nweta ya na ndabara maka ndị ọrụ niile?
Wenezde, Disemba 8, 2021 6:03 nke ụtụtụ
Ndewo, Andrew daalụ maka ozi ahụ.
Enwere ike ime ya mana ọ chọrọ ntakịrị ịmegharị ya.
Ọ bụghị echiche dị njọ itinye ihe dị ka script bash n'ime nkuzi m maka ndị mmadụ chọrọ ka ọ bụrụ ndabara maka nnukwu onye ọrụ, yana achọrọ m oge iji hazie ya wee nwalee nke ọma n'ihi na ọ dịghị mgbe ọ bụla m chọrọ ime ya maka KDE, yabụ. ọ ga-amasị gị ịnwale ihe tupu ikesa.